ABO: Mirgi Abbaa-biyyummaa Bilisummaa Dhugaa Qofaan Nuuf Kabajama ! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooABO: Mirgi Abbaa-biyyummaa Bilisummaa Dhugaa Qofaan Nuuf Kabajama !
ABO: Mirgi Abbaa-biyyummaa Bilisummaa Dhugaa Qofaan Nuuf Kabajama !
Raadiyoo Bilisummaa, Caamsaa 30, 2019
Raadiyoo Bilisummaa, Caamsaa 30, 2019 Listen to "RB-Xiyyeeffannoo 31-05-2019" on Spreaker.
OPDO Sobaan Gammada jetti. Raya Abadura Abagaro itti himi.